China 808nm + Q mgba ọkụ laser DY-DQ rụpụta na Factory | Danye
Diode 808 Laser ahụ bụ ụkpụrụ ọla edo na Nwepu ntutu na-adịgide adịgide ma dabara adaba na ntutu niile na-acha ụcha na ụdị anụ ahụ-gụnyere akpụkpọ anụ. Igwe nhichapụ laser 808nm diode kacha mma maka ịmịkọrọ melanin ka ọ dị oke ọfụma n'akụkụ dị iche iche nke anụ ahụ, ntutu ntutu wee rute iwepu ntutu ọ bụla n'ụzọ dị mfe, yana nsonaazụ na-adịgide.
Kwesịrị ekwesị maka ụdị anụ ahụ niile
Nkà na ụzụ dị n'azụ laser Diode 808 na-eme ka akpụkpọ ahụ jide obere laser, na-ebelata ihe ize ndụ nke hyper-pigmentation.
Sapphire emetụ usoro nwere ike ijide n'aka na ọgwụgwọ dị mma karịa na enweghi mgbu.
Sụgharịa rejuvenation, pore shrinking, mmanu mmanu anụ mma, anụ miri ihicha, whitening na tightening.
tufuo freckles, nkuanya igbu, okpu anya akara akara, egbugbu, Nevus nke Ota, nwa na-acha anụnụ anụnụ na agba na na na ink;
tufuo freckles, nkuanya egbugbu, okpu anya akara ahịrị, egbugbu, egbugbere ọnụ akara, emighị emi-acha ọbara ọbara na aja aja ink, telangiectasis na na
ink, telangiectasis na na.
1. ọkachamara 808nm diode laser na ọgwụ na ahụ ike Q mgba ọkụ yag laser na-ahụ n'ụzọ zuru okè jikọtara n'ime otu ngwaọrụ;
2.Diode laser nwere FHR na Standard HR abụọ na-arụ ọrụ ụdịdị maka ọrụ dị iche iche chọrọ (Max. Energy 120J dị)
3. Q mgba ọkụ laser nwere nnukwu mmepụta ike ruo Max.1500J, na laser handpiece bụ ogologo ndụ iji;
4. Ogologo 808nm, 1064nm, 532nm na 1320nm;
5. Abụọ handpieces laser bụ nke mbughari, mfe dochie ọhụrụ;
6. Human emebe software ihuenyo, mfe iji rụọ ọrụ na iji;
7. Ezi usoro nke usoro jụrụ oyi iji kpuchido igwe na-arụ ọrụ n'ime awa 24;
8. Igwe ejikere mmiri, onodu mmiri, nyocha mmiri na ihe na-eme ka ọ dị egwu iji lelee sistemu nkịtị na-arụ ọrụ;
9. Nkwado CE, echedoro iji ya;
Aha 808nm na Q gbanwere laser 2 na 1
Erdị laser 808nm Diode laser + Q gbanwere Nd Yag laser
Maka laser 808nm
Ogologo ebili mmiri 808nm
Abù size 12 * 12mm
Ọnọdụ nnyefe Direct sapphire njikọ
Ọnọdụ ngwa ngwa (FHR)
Modedị nkịtị (HR)
Njupụta ike 6-50J / cm2 mgbanwe site ofu usu obosara nso
Obosara usu 80-200ms mgbanwe (Max.350ms nhọrọ)
Ogologo ebili mmiri 1064mn, 532nm, 1320nm
Max.output ike 1000mj (ike kachasị elu ruo 1500mj)
Pulse oge Iri
Ugboro 1-6Hz (nhọrọ 10Hz)
Ìhè ntụpọ diamenter 0.5-8mm
Laser aiming ụdị 5mw, 650nm
Ihuenyo Panel Nnukwu ihuenyo mmetụ 10.4
Jụrụ oyi Air + usoro mgbasa mmiri + semiconductor jụrụ
Akụkụ mpụga L44cm * W40cm * H105cm
Nha ịbụ 40kgs
Ngwugwu Standard mbupụ osisi ngwugwu
Nke gara aga: Ebube Ehi + RF 3 na 1 Sistem DY-B101
Osote: ỌH NEWR 360 360 Cryolipolysis Vacuum 4 na 1 Platform DY-CRYO
Portable 808nm / 810nm diode laser ntutu mwepụ ...
2020 Kacha ọhụrụ na elu àgwà nke 808nm diode las ...
2020 Kacha ọhụrụ danye diode laser 808nm na-adịgide adịgide h ...
Elu àgwà nke 808nm diode laser ntutu mwepụ ...
Portable 808 755 1064 mbuaha mmiri na ebili mmiri nke ọrụ ...